Xhasa Indlela KaYehova UThixo Yokulawula! | Efundwayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseKenya Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseSlovakia Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMalawi Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseRomaniya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiAmis IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCakchiquel (Sakumbindi) IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiZapotec (saseIsthmus)
“Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa.”​—ISITYHI. 4:11.
Kutheni uYehova ekufanele ukuba nguMongami wendalo iphela?
Kutheni ulawulo lukaYehova lulolona lufanelekileyo?
Sinokulumela njani ulongamo lukaYehova ngoku?
1, 2. Yintoni esiqiniseke ngayo sonke? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
NJENGOKO litshilo inqaku elingaphambili, uMtyholi wathi uYehova ulawula ngendlela engafanelekanga yaye abantu banokuzilawula bhetele. Ngaba uSathana unyanisile? Masithi abantu bebezilawula kwaye bephila ngonaphakade. Ngaba izinto bezinokubahambela kakuhle kunaxa belawulwa nguThixo? Ngaba wena ubuya konwaba nangakumbi ukuba ubusenza ngoyibonayo kwaye uphila ubomi obungenasiphelo?
2 Akakho umntu oya kukuphendulela loo mibuzo. Mntu ngamnye kufuneka azicingele iimpendulo. Iza kuvela izicacele into yokuba kufanelekile ukulawulwa nguThixo. Akakho olawula njengaye! Yaye simele siluxhase ulawulo lwakhe ngeentliziyo zethu zonke. IBhayibhile isenza siqiniseke ngalo nto. Ngokomzekelo, iZibhalo zisixelela ukuba uYehova ulawula kakuhle.
UYEHOVA UNELUNGELO LOKULAWULA
3. Kutheni inguYehova yedwa ofanelwe kukuba nguMongami?
3 UYehova ungoyena ufanele ukulawula indalo yonke kuba unguSomandla noMdali. (1 Kron. 29:11; IZe. 4:24) KwiSityhilelo 4:11, abaza kulawula noKristu abayi-144 000, bathi: “Ufanele, Yehova, Thixo wethu, ukwamkela uzuko nembeko namandla, ngenxa yokuba wadala zonke izinto, nangenxa yokuthanda kwakho zabakho yaye zadalwa.” Nyhani ke, kuba uYehova edale zonke izinto, unegunya lokuba alawule bonke abantu kuquka neengelosi.
4. Kutheni ukungafuni ukulawulwa nguThixo ikukuyisebenzisa kakubi inkululeko yethu?
4 Akukho nanye into edalwe nguSathana. Ngoko, akanalungelo lokulawula. Likratshi elabangela ukuba yena nabantu bokuqala ababini bavukele ulawulo lukaYehova. (Yer. 10:23) Ewe kona, njengezidalwa ezinenkululeko yokuzikhethela, babenako ukukhetha ukungaphathwa nguThixo. Kodwa ngaba loo nto ithetha ukuba babenelungelo lokwenjenjalo? Akunjalo. Inkululeko yokuzikhethela ibenza abantu batsho bakwazi ukukhetha ngendlela efanelekileyo imihla ngemihla. Nakuba kunjalo, ayibaniki ilungelo lokuvukela uMdali, uMniki-bomi. Kucacile ke, ukuphikisana noYehova kukuyisebenzisa kakubi inkululeko esinayo yokuzikhethela. Abantu bamele balawulwe nguYehova.
5. Kutheni siqinisekile ukuba izigqibo zikaThixo zifanelekile?
5 Nasi esinye isizathu sokuba uYehova ekufanelekela ukulawula. Igunya lakhe ulisebenzisa ukuze agwebe ngokugqibeleleyo. Uthi: “NdinguYehova, Lowo ubonakalisa ububele bothando, okusesikweni nobulungisa emhlabeni; kuba ndiyoliswa zezo zinto.” (Yer. 9:24) Akajongi mithetho ibhalwe ngabantu ukuze abone indlela eyiyo yokugweba. Bubuntu bakhe ukugweba ngokugqibeleleyo, ibe ngenxa yoko, nguye obhalele abantu imithetho. “Ubulungisa nomgwebo yindawo emisiweyo yetrone [yakhe],” ngoko sinokuqiniseka ukuba yonke imithetho, imigaqo nezigqibo zakhe zilungile. (INdu. 89:14; 119:128) Nangona esithi ulawulo lukaYehova luwa nganeno, uSathana akakwazanga ukwenza ukuba kusoloko kugwetywa ngendlela efanelekileyo apha emhlabeni.
6. Sisiphi esinye isizathu esinika uYehova ilungelo lokulawula umhlaba?
6 Ngaphezu koko, uYehova ukufanele ukulawula kuba unolwazi nobulumko obufunekayo ukuze alawule indalo iphela. Ngokomzekelo, uThixo wanika uNyana wakhe amandla ukuze anyange izifo ababengakwazi ukuzinyanga oogqirha. (Mat. 4:23, 24; Marko 5:25-29) KuYehova, yayingeyomimangaliso leyo. Uyayazi indlela umzimba osebenza ngayo ibe unawo amandla okuwuphilisa. Kuyafana ke nangokuvusa abafileyo nokuthintela iintlekele zemvelo.
7. Ubulumko bukaYehova bubogqitha njani obeli hlabathi lilawulwa nguSathana?
7 Eli hlabathi lilawulwa nguSathana lisakhangela indlela yokulamla kwiimfazwe zamakhaya neziphakathi kwamazwe. Kodwa nguYehova yedwa onobulumko bokuzisa uxolo ehlabathini. (Isa. 2:3, 4; 54:13) Xa sifunda ngolwazi lukaYehova nobulumko bakhe, siye sizive njengoPawulos, owabhala wathi: “Hayi ubunzulu bobutyebi nobobulumko nobolwazi lukaThixo! Hayi indlela engaphengululeki ngayo imigwebo yakhe nendlela ezingalandeki ngayo iindlela zakhe!”—Roma 11:33.
ULAWULO LUKAYEHOVA LOLONA LUFANELEKILEYO
8. Yintoni ekwenza usondele kuYehova xa usiva ngendlela alawula ngayo?
8 IBhayibhile ayipheleli nje ekucaciseni ukuba uYehova unelungelo lokulawula. Ibonisa nokuba kutheni ulawulo lwakhe lugqwesile kunolwabanye abantu. Esinye isizathu soko kukuba ulawula ngothando. Ngokwenene, siyasondela kuye xa sisiva ngendlela akhetha ukusilawula ngayo. UYehova nguThixo “onenceba nobabalo, ozeka kade umsindo, onobubele bothando obuninzi nenyaniso.” (Eks. 34:6) Abakhonzi bakhe ubaphatha ngentlonipho nangesidima. Usikhathalele ngaphezu kokuba thina sizikhathalele. UMtyholi uyaxoka xa esithi uYehova ubabandeza okulungileyo abakhonzi bakhe abathembekileyo. Wade wanikela ngoNyana wakhe amthanda kunene ukuze abantu babe nethemba lobomi obungenasiphelo!—Funda iNdumiso 84:11; neyabaseRoma 8:32.
9. Sazi njani ukuba uThixo unomdla kumntu ngamnye?
9 UYehova akapheleli nje ekuzixhalabiseni ngabakhonzi bakhe njengeqela. Unomdla kakhulu kumntu ngamnye. Masenze umzekelo ngeminyaka engamakhulu amathathu apho uYehova wayesebenzisa abagwebi ukuze ahlangule amaSirayeli kwiintshaba zawo. Ngelo xesha linzima, wakwazi ukuqaphela uRute owayengengomSirayeli, nowancama okuninzi ukuze aguqukele kunqulo lwenene. UYehova wamsikelela uRute ngomyeni nangonyana. Kodwa akuphelelanga apho. Xa evusiwe, uza kufumanisa ukuba unyana wakhe waba kumnombo okhokelela kuMesiya. Yiba nombono wendlela aya kuvuya ngayo xa efumanisa ukuba ibali lakhe lobomi labhalwa eBhayibhileni!—Rute 4:13; Mat. 1:5, 16.
10. Kutheni sisithi indlela uYehova alawula ngayo ayikho ngqwabalala?
10 Indlela uYehova alawula ngayo ayicinezeli kwaye ayikho ngqwabalala. Ivumela umntu abe nenkululeko kwaye yenza kubekho ulonwabo. (2 Kor. 3:17) UDavide uyibeka ngolu hlobo: “Isidima nobungangamsha buphambi kwakhe, amandla novuyo endaweni yakhe.” (1 Kron. 16:7, 27) Ngokufanayo, umdumisi uEtam wabhala wathi: “Banoyolo abantu abayaziyo imikhwazo yovuyo. Bahamba ekukhanyeni kobuso bakho, Yehova. Egameni lakho bayavuya imini yonke baphakame nangobulungisa bakho.”—INdu. 89:15, 16.
11. Sinokwenza njani ukuze siqiniseke nangakumbi ukuba ulawulo lukaYehova lufanelekile?
11 Xa sihlala sicamngca ngendlela uYehova alunge ngayo siya kuqiniseka ukuba ulawulo lwakhe lolona lufanelekileyo. Siya kutsho sizive njengomdumisi owathi: “Imini ezintendelezweni zakho ilunge ngakumbi kunewaka kwenye indawo.” (INdu. 84:10) Phofu ke besinokulindela ntoni? Kaloku uMdali noMenzi wethu onothando uyazazi izinto esizidingayo ukuze sonwabe ngokwenene, ibe usinika intabalala yazo. Nantoni na afuna siyenze sukube ecingela kwathina kwaye efuna sonwabe. Kunjalo kwanaxa kukho izinto ekufuneka sizincamile.—Funda uIsaya 48:17.
12. Yintoni esenza sifune ukuxhasa ulawulo lukaYehova?
12 IBhayibhile ithi nasemva koLawulo Lweminyaka Eliwaka LukaKristu, abanye abantu baza kukhetha ukuluvukela ulawulo lukaYehova. (ISityhi. 20:7, 8) Baza kube bengenwe yintoni ukuze benze loo nto? Asithandabuzi ukuba xa uMtyholi ekhululwe entolongweni, injongo yakhe iza kuba kukulahlekisa abantu. Ibe njengesiqhelo, uya kuba nomtsalane kubantu abazicingela bodwa. Usenokuzama ukwenza abantu bacinge ukuba ikho enye indlela yokuphila ngonaphakade bengathobeli uYehova. Uya kube exoka kwakhona. Kodwa nantsi eyona nto ibalulekileyo: Ngaba nathi siza kuqhatheka ke? Ukuba siyamthanda uYehova ibe simkhonza kuba elungile nangenxa yokuba enelungelo lokulawula indalo iphela, loo maqhinga kaSathana aya kuba nezothe kuthi. Asinakuze sifune ukuphila ngaphandle kolawulo lukaYehova olufanelekileyo nolunothando.
UNGAGUNGQI EKUXHASENI ULONGAMO LUKATHIXO
13. Xa sixelisa uThixo sibonisa njani ukuba siyamxhasa?
13 Ngokuqinisekileyo ulawulo lukaYehova lufanelwe kukuxhaswa sithi, siyenza loo nto ngokuzithandela. Njengokuba sele sibonile, unelungelo lokulawula, ibe indlela alawula ngayo yeyona igqwesileyo. Sinokuluxhasa ulongamo lwakhe ngokungagungqi ekumkhonzeni. Yeyiphi enye indlela esinokuluxhasa ngayo? Sinokuluxhasa nangokwenza izinto ngeendlela zikaYehova. Xa sisenjenjalo, sibonisa ukuba siyayithanda ibe siyayixhasa indlela alawula ngayo.—Funda eyabase-Efese 5:1, 2.
14. Iintloko-ntsapho nabadala banokumxelisa njani uYehova?
14 Siye safunda eBhayibhileni ukuba uYehova ulisebenzisa ngothando igunya lakhe. Iintloko-ntsapho nabadala abathanda ulawulo lwakhe abayi kunyanzela izinto ezifunwa ngabo, ngokungathi bazakhela olwabo ulawulo ecaleni. Kunoko, baya kuxelisa uYehova. Umzekelo womntu owamxelisayo uThixo noNyana wakhe nguPawulos. (1 Kor. 11:1) UPawulos akazange abamenye abazalwana okanye abanyanzele ukuba benze okulungileyo. Kunoko, wababongoza. (Roma 12:1; Efe. 4:1; Filem. 8-10) Leyo yindlela uYehova azenza ngayo izinto. Ngoko, bafanele benjenjalo ke bonke abo bamthandayo nabaxhasa indlela alawula ngayo.
15. Xa sihlonela ubuntloko obumiselwe nguThixo sibonisa njani ukuba siyayithanda indlela uYehova alawula ngayo?
15 Sibujonga njani ubuntloko obumiselwe nguThixo entsatsheni nasebandleni? Xa sibuhlonela yaye sinentsebenziswano, sixhasa ulongamo lukaYehova. Enoba asisiva ncam okanye asivumelani nesigqibo esenziweyo, siya kuqhubeka siyixhasa indlela uThixo afuna izinto zenzeke ngayo. Oko kwahluke kakhulu kwindlela elenza ngayo eli hlabathi, kodwa kwenziwa ngolu hlobo phantsi kolawulo lukaYehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Siyancedakala ngokwenjenjalo, kuba uThixo ufuna kulungelwe thina.
16. Abaxhasi bakaThixo bazenza njani izigqibo ezifuna bona?
16 Sinokuphinda sibonise ukuba siyayixhasa indlela uThixo alawula ngayo xa sisenza izigqibo ezifuna thina. UYehova akasiniki imiyalelo ngayo yonk’ into le. Kunoko, ukuze asikhokele usibonisa indlela acinga ngayo. Ngokomzekelo, akukho ludwe alunika amaKristu lwendlela yokunxiba. Kunoko, usibonisa ukuba unqwenela sikhethe indlela yokunxiba neyokuzilungisa engasitsaleli amehlo nefanele amaKristu. (1 Tim. 2:9, 10) Uxhalabele nokuba singabakhubekisi abanye abantu okanye sibaphazamise ngezigqibo zethu. (1 Kor. 10:31-33) Ukuba siyayithanda kwaye siyayixabisa indlela uYehova alawula ngayo, siya kujonga indlela acinga ngayo nezinto ezimxhalabisayo ngaphambi kokwenza izigqibo, kunokuba senze into efunwa sithi.
Xhasani ulongamo lukaThixo xa nisenza izigqibo nakwimicimbi yentsapho (Jonga isiqendu 16-18)
17, 18. Zeziphi ezinye iindlela abo batshatileyo abaxhasa ngazo ulongamo lukaYehova?
17 Makhe sithethe ngenye indlela abo batshatileyo abanokuxhasa ngayo iindlela zikaYehova nolongamo lwakhe. Kuthekani ukuba kunzima emtshatweni? Mhlawumbi awuyiyo tu into obuyilindele. Kutheni ungakhe ucinge ngendlela uYehova awawaphatha ngayo amaSirayeli? UYehova wazifanisa nomyeni kolo hlanga lwamandulo. (Isa. 54:5; 62:4) Kwakunzima nyhani kuloo “mtshato”! Sekunjalo, uYehova akazange akhawuleze anikezele. Wawaxolela kaninzi loo maSirayeli waza wanamathela kumnqophiso awayewenze nawo. (Funda iNdumiso 106:43-45.) Ngaba olo thando lungagungqiyo alusenzi sitsaleleke kuYehova?
18 Xa abo batshatileyo bezithanda iindlela zikaYehova bayamxelisa. Abakhangeli amacebo angqubana nezibhalo okuwuchitha umtshato. Bayazi ukuba uYehova ubabophelele ngedyokhwe ndawonye ibe ufuna ‘banamathelane.’ Kukukrexeza kuphela okunokwenza umntu aqhawule umtshato aze avumeleke ukuphinda atshate. (Mat. 19:5, 6, 9) Xa beyinyamezela imeko de bazame nokuyiphucula, baxhasa indlela uYehova alawula ngayo.
19. Simele senze ntoni xa siye sawa nganeno ekuxhaseni ulongamo lukaThixo?
19 Ekubeni sizenza iimpazamo, ngamanye amaxesha siya kwenza izinto ezimdanisayo uYehova. Uyayazi loo nto ibe ngenxa yokuba esithanda usilungiselele intlawulelo ngoKristu. Ngoko xa siye samona uYehova, simele sicele uxolo kuye. (1 Yoh. 2:1, 2) Kunokuba sihlale sizigweba, kufuneka senze konke okusemandleni ukuze singaphindi siyenze loo nto. Xa sihlala sisondelelene noYehova, uya kusixolela yaye uya kusinceda sichache kwaye singayiphindi loo nto kwakhona.—INdu. 103:3.
20. Kutheni simele siluxhase ngoku ulongamo lukaYehova?
20 Kwihlabathi elitsha, sonke siya kulawulwa nguYehova ibe siya kufunda iindlela zakhe ezilungileyo. (Isa. 11:9) Kodwa ke, inkoliso yezo ndlela siyifunda ngoku. Imbambano yolongamo sele iqalisile ukulungiswa. Ngoku lixesha lokuba sixhase ulongamo lukaThixo ngokungagungqi kuye, simkhonze kwaye senze konke okusemandleni ethu ukumxelisa kuzo zonke izinto esizenzayo.